It is me. Ko Niknayman.: စက်တင်ဘာ (၂၇) ရက်နေ့ဓါတ်ပုံများ။ (၁)။
စက်တင်ဘာ (၂၇)ရက်နေ့ဓါတ်ပုံများ။ (၁)။http://picasaweb.google.com/niknayman/BurmaOn270907
Posted by Ko Niknayman at 9:46 AM